Hiran State - News: HS:- Shirkii Al qacidada Somaliya uga socday magaalada Baydhabo oo lagu kala tagay kadib markii uu muran ka dhashay sida laga yeelayo.
HS:- Shirkii Al qacidada Somaliya uga socday magaalada Baydhabo oo lagu kala tagay kadib markii uu muran ka dhashay sida laga yeelayo.
Shir maalmahani uga socday magaalada Baydhabo oo ah xarunta labaad ee ugu weyn dalka Somaliya Al qacida ayaa muran badan kadib lagu kala tagay kadib markii ay qaar ka mid ah ajaaniibta ku sugan wadanka Somaliya ee Al qacida soo jeediyeen in la bedelo magaca Al Shabaab oo ay sheegeen in dhibaato badan loogu geystay shacabka Somaliyeed oo aan magacaas maqli karin hada iyo waxii ka danbeeyo.
Waxaase arintaas ka biyo diiday hogaamiyaal u badnaa Somali oo sheegay iney sharaf ka dhac ku tahay in magacii ay dad badan difaaciisa god u galeen maanta la yiraahdo hala bedelo. muran iyo dood kadib hogaamiyasha Somalida oo aan arimaha Alqacida awood badan ku laheyn loona sameystay oo kaliya sidii umada Somaliyeed magacaas loogu isticmaali lahaa ayaa ugu danbeyn qaatay in magaca la bedelo marka laga reebo tiro yar ooba ku hanjabeen ineyba xarakada dhanba iskaka baxayaan marka bayaan hada la diyaarinayo loo soo bandhigo shacabka ay lugaha iyo gacamaha horey uga jareen intii ka bad baadayna ay wadanka ka saareen ee qaxootiga ku ah wadamada deriska la ah Somaliya.
Waxaa kale oo uu muranweyn ka dhashay markii hadane ajaaniibtii Al qacida ee ku sugneyd shirka soo jeediyeen in ay Rido taahay TFGda uu Shariifka hogaamiyo iyadoo ay arintaas u sacbiyeen hogaamiyaasha ka soo jeeda Puntland iyo Somaliland oo kaliya oo ay ka gaabsadeen kuwa koofurta Somaliye ee iyagu degaanadooda iyo dadkooda la gubayo halka kuwa sacbinayo dhulkoodu nabad u yahay oo ay caruurtooda wax u bartaan.
Shirka ayaa lagu soo waramayaa in maalinba meel hor leh lagu qabanayey maadama laga cabsanayey in ay bartilmaameedsadaan diyaraha dagaalka ee dul wareegaya hawada Somaliya. qaar ka mid ah ajaaniibta ayaa intii uu shirka socday quul dareynayey in guulo la taaban karo ay ururka Al qacida ka keeni karaan bariga Africa kadib markii ay arkeen sida uu qabiilka u saameeyey hogaamiyaasha Shabaab ee Somalida oo midkasta taageeraya oo kaliya go,aanada uu isleeyahay dadkaada iyo degaankaada wax dhib ah kama soo gaarayo.
Ugu danbeyn qodobada kale waa kuwo lagu beer laxawsanayo shacabka Somaliyeed iyadoo lagu dhiirageilnayo iney la dagaalaan waxa ay ku sheegeen Gaalada dalka ku soo duushay oo ay ula jeedaan Amisom iyo Kenya. waxaa mudadii uu shirka socday leysku soo qaaday dhaqaalaha darida soo wajahday ururka iyo hoos u dhaca ku yimid canshuurtii dadka laga qaadi jiray tan iyo waxii ka danbeeyey markii ay farahooda ka baxday gacan ku heyntii suuqii weynaa ee Bakaaraha oo shirkadaha la baadi jiray.
Shirka ayaa soo xirmay iyadoo aan wax guul ah laga gaarin laakisne siyaasada Al qacida waa in aduunyada la maqashiiyo in shirkaasi guul ku dhamaaday si kuwa aan ku sugneyn goobta uu shirka ka dhacay loo tusiyo in walito uu noolyahay ururka xitaa hadii la dilay hogaamiyahii ururuka OSaama Bin Laden. arinta kale ee iyaduna aad looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa in aysan xarakada isku xirneyn oo ay yaraadeen macluumaadkii ay bulshada dhexdooda ka heli jireen ajaaniibta Al qacida ee ku sugan gudaha Somaliya taasi oo ay ku macneeyeen inuu keenay jabka iyo iney xarakatu lumiyaan degaano badan oo dalka ka mid ahaa oo gacantooda ku jira dhawr bilood ka hor.
Ugu danbeyn waxaa lagu wadaa iney xarakada Al Shabaab iyo ururweynaha Alqacida kuwooda ku sugan Somaliya soo saaraan war murtiyeed maalmaha soo socda si qodobo 10 ah oo intii aan shirka lagu kala tagin la boobsiiyey loogu soo bandhigo warbaahinta. Ajaaniibta ku sugan Somaliya oo garabka siinaya kuwa Shabaab ayaa siweyn uga qaayliyey ciidamada Kenya iyo kuwa maamulka Azaaniya ee dagaalka ka wada Juboooyinka kuwaasi oo ay sheegeen iney hakadweyn galiyeen isticmaalkii dekeda Kismaayo oo aysan ganacsatadu u isticmaalin sidii hore waxeyna sheegeen hadii magaaladaasi gacantooda ka baxdo iney ka dhigan tahay in ay bur bureen maadam sdia ay shegeen luminayaa dhaqaalo ay ku qiyaaseen 3.5 Million canshuur ah o ka soo gali jiray gobolka J/hoose.
Marka laga soo tago bur burka Shabaab oo 2 sano kadib maanta mareyso waa inaad bedeshaan magaca hadane awooda Shabaab ee dalka Somaliya ma ahan sidii hore waxaana maalinba maalinta ka danbeysa yaraanaya dhalinyaradii kooxda u dagaalami jirtay amaba dadka loo diri jiray si ay u dilaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida aqoonyahanada, culiamda, saraakiisha, ganacsatada iyo cidkasta oo ka soo horjeeda mabda'ooda xag jirnimada ah.
· admin on December 04 2011 11:34:11 · 0 Comments · 1862 Reads ·
14,588,997 unique visits